Black Coal, Thin Ice ( 2014 ) - Myanmar Asian TV
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က နာမည်ကြီးပြီး Golden bear award fromBerlinale-Berlin International Film Festival ဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဆွတ်ခူးထားခဲ့တဲ့ အရက်စက်ဆုံး လူသတ်သမားကိုဖမ်းကြတဲ့အကြောင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးမှာပါနော်
သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ ဇာတ်ဆောင်မင်းသားLiao Fanနဲ့ ဇာတ်ဆောင် မင်းသမီး Gwei Lunmei တို့ဖြစ်ပြီး Director Diao Yinan ကပီပီပြင်ပြင် ရိုက်ကူးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ
၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ ရဲအရာရှိတွေမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့လူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။
လူသတ်ပြီး အပိုင်းအစတွေကို မီးသွေးစက်ရုံမှာ ပစ်ထားခဲ့တဲ့အတွက် အစိတ်အပိုင်းတွေအကုန်လုံးက နေရာအနှံ့ကိုပျံ့နှံသွားခဲ့တယ်။
-ဇာတ်ကောင်တွေက ဘယ်လိုတွေ့ဆုံပြီး ဘယ်သူက တရားခံဖြစ်နေမှာလဲ?
-ဒီလိုအရက်စက်ဆုံးလူသတ်မှုမျိုးကို ဘယ်သူက ကျူးလွန်ခဲ့တာလဲ?
Thriller ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်ပြီး အတူတူတရားခံကိုဖော်ထုတ်ကြရအောင်နော်
Rating မှာဆိုလည်း IMDb 6.7/10,Rotten tomatoes
Translator: May Thinzar Myint
Soliddrive.co Myanmar758MB Download Soliddrive.co Myanmar396MB Download Soliddrive.co Myanmar758MB Download Soliddrive.co Myanmar396MB Download
Trailer: Black Coal, Thin Ice ( 2014 )